Akụkọ - Disinfectant na-ehichapụ
Ọrịa ahụ ka na-aga n'ihu. Nke a bụ agha nke onye ọ bụla na-ekere ma onweghị egbe egbe. Na mgbakwunye na ịkwado akara n'ihu dịka ha nwere ike, ndị nkịtị kwesịrị ichebe onwe ha ma zere ọrịa, gbochie oria ahụ na-eme onwe ha, ma ghara ịkpata ọgba aghara.
E nwere ụzọ atọ ama ama ugbu a nke nnyefe nje: mmiri ọnụ, ụmụ irighiri mmiri na nnyefe kọntaktị. Abụọ mbụ nwere ike n'ụzọ dị irè-egbochi site yi masks na enyo anya, ma ndị kasị mfe eleghara anya bụ kọntaktị nnyefe!
Iji zere ịgbasa mgbasa nke nje ahụ, ịsa aka gị ugboro ugboro, disinfecting, na disinfecting ihe ịchọrọ imetụ aka bụ usoro mgbochi kachasị dị irè.
Dabere na onye mmuta Li Lanjuan, onye otu ndi otu ndi okacha amara di elu nke National Health Commission, 75% etinol disinfection nwere ike wepu nje di ndu. Coronavirus ọhụrụ a na-atụ egwu mmanya ma ọ naghị eguzogide oke okpomọkụ.
Ya mere, ọ dị mkpa iji 75% na-a alcoholụ mmanya iji kpochapụ ebe ndị kwesịrị imetụ aka kwa ụbọchị! Gini mere o jiri dị mkpa na 75% ị chọrọ? Sayensị ndị a ma ama:
Nke a bụ n'ihi na ị aụbiga mmanya ókè na-aba ụba ga-eme ihe nkiri na-eche nche n'elu nje ahụ, na-egbochi ya ịbanye na nje bacteria, ọ na-esikwa ike igbu nje ndị ahụ kpamkpam.
Ọ bụrụ na ị concentrationụ mmanya na-aba n’anya pere mpe, n’agbanyeghi na ọ nwere ike ịbanye na nje bacteria, ọ gaghị enwe ike ịgbanye protein dị n’ahụ, ma ọ nwere ike igbu nje ahụ kpamkpam.
Nlere egosiwo na mmanya 75% nwere mmetụta kacha mma, ọ dịghị ma ọ bụ obere!
Na-arụ ọrụ mgbochi nje kwa ụbọchị! isi ihe a dị ezigbo mkpa!
Taa, onye editọ na-atụ aro ka a na-emepụta ọgwụ e ji egbochi ọgwụ nje kwa ụbọchị maka onye ọ bụla——
Disinfecting wipes nwere 75% mmanya.
Ihe ọ alcoholụ alcoholụ mmanya a na-ehichapụ nwere ike ọ bụghị naanị igbochi coronavirus ọhụrụ ahụ, kamakwa ọ bara uru maka nje bacteria dị ka E. coli na Candida albicans!
Ọ bụghị naanị na ọ na-eji mmanya 75% eme ihe, mana agbanyeghị mmiri ejiri mee ihe ọtụtụ oge ma nwee ike ịgba ọgwụ mgbochi!
Dị ka Shenzhen Health Commission si kwuo, na February 1, Institute of Disease Liver, Liverlọ Ọgwụ nke Shenzhen nke atọ hụrụ na stool nke ụfọdụ ndị ọrịa nwere oyi baa na-ebute ụdị coronavirus ọhụrụ anwalela nke ọma maka ụdị coronavirus ọhụrụ ahụ. Enwere ike ịnwe nje dị ndụ na oche onye ọrịa.
Yabụ, ị kwesịrị ị paya ntị na nje ahụ mgbe ị na-aga mposi. Mmanya mmanya a nwere ike ihichapụ nje bacteria nke akwụkwọ mposi nkịtị enweghị ike iwepu, nke bụkwa usoro mgbochi!
N’ikwu ya n’ụzọ ọzọ, na mgbakwunye n’itinye ihe nkpuchi iji gbochie ụmụ irighiri mmiri, anyị ga-akpacharakwa anya na ọ bụ aka ka anyị na-ebute nje ahụ, na-ete anyị n’anya, na-atụtụ imi anyị, na-emetụkwa ọnụ aka iji bute ọrịa ma gbasaa.
Ọ bụrụ na anyị esi n’èzí lọta, n’agbanyeghị na anyị na-ekpuchi ihe mkpuchi, uwe na ntutu anyị ka nwere ike ịbụ nje. N'oge oria a, o kacha mma ilata ụlọ. Ahụ dum nwere ike gbanwee, saa ya, were kwa ọgwụ n’ahụ.
Karịsịa aka anyị, anyị ga-akwọ aka anyị ugboro ugboro!
Nke a bụ isi ihe na 90% nke ndị mmadụ na-eleghara anya;
Otu n'ime ndụmọdụ ndị Healthtù Ahụ Ike Worldwa nyere na nchebe nke coronavirus ọhụrụ, nke mbụ bụ ịsa aka.
N'ikpeazụ, achọrọ m ụwa ka anyị laghachite n'oge nchekwa na ahụike.